Koobiyaynta Dadka (humancloning) : Dunidan aynu ku noolnahay waxay soo martay marxalado nololeed oo kala duwan, kuwaasi oo is-baddalayay mar kasta oo isbaddal ku yimaado garaadka ama aqoonta bulshada caalamkan ku dhaqan. GUJI [AhmedYaasiin]
Soomaaliya iyo Itoobiya dan ma wadaagi karaan? GUJI...
Ma'Ogtahay in Wararka Kuqoran Luqadda Ingiriiska ee Soomaalida ay maalin kasta kusoo dhacaan linkiyada kuqoran meesha ugu saraysa bartamaha bogga hore ee SomaliTalk.com.
SOCDAALKA IYO CAAFIMAADKA
waxaa diyaariyey: Axmed-yaasiin Maxamed Sooyaan
TAARIIKHDA MAANTA: | DAABACADA: Nov 23, 2002
Socdaalka aan ka hadlayno waa socdaalka uu qofku ku safro diyaarada , ayadoo ay dhammaan isku xiran yihiin socdaal kasta iyo caafimaadka qofka . Guud ahaan socdaalka maanta aad ayuu uga duwan yahay kuwii taariikhda bilawgeeda ahaa, ama waayadii dhexe , marka laga fiiriyo xagga dhibaatooyinka safarka laga mudan jirey waayadaas.
Qofka maanta waxa uu raacaa diyaarad soo dhaweysey dhulkii fogaa , waxa meel kasta laga furay hotel iyo maqaayad hoos u dhigay dhibaatooyinkii uu qofka ka qabey dhinacyada ammaanka, cuntada, iyo hoyga .
Hase yeeshee waxaa intaa barbar yaal dhibaatooyin caafimaad oo mararka qaarkood qofka socotada ah ugu imaan kara si kadis ah , kuwaasoo ka imaan kara gaadiidka dhaqaaqiisa ,isbedelka cimilada , samayska dhulka , iyo weliba cuntada .
Marka uu qof socdaalayo ayaa waxaa dhacda in dadka qaarkiis uu dhibaato badan kala kulmo dhaqaaqa gaadiidka uu saaran yahay , oo waxaa dhacda in qofku dareemo in calooshu dhaqaaqday , lalabbo , dhidid qaboow oo jirka oo dhan ka soo baxa , matag ,iyo maqaarka wejiga oo dhada .
Asal ahaan arrimahaas oo dhan waxay ka soo jeedaan KAHSI (alargic) gaarey xubinta isu dheelitirnaanta qofka ee dhegta gudeheeda ku jirta ( COCHLEA) , markaasoo ay qaybtaasi gufaysanto dhaqdhaqaaqa kediska ku soo gaarey awgii , sida ;cufnaanta hawada haddii uu qofku diyaarad saaran yahay , ama haddii ay dooni tahay dhaqdhaqaaqa hirka ama ruxashada baabuurka .
Xaaladaan kahsiga ayaa waxay u baahan tahay tabaabusho uu qofku ku sii tala galo ka hortageeda , asagoo qaadanaya dawooyin lid ku ah xasaasiyada kalana tashanaya dhakhtar , waxaa kaloo ayadana haboon in dadka isku og xasaasiyada noocaan ah ee aan soo sheegnay waxyaabaha ay keento aysan wax ku akhrisan inta ay saaran yihiin gaadiidka ama joojiyaan wax akhriska haddii ay dareemaan in la soo hayo .
Waxaa kaloo ayadana jirta in qofku marka uu fuulo diyaaradda ay dhegaha awdmaan ama ay xanuunaan , ama uu caburo , ama uu dibiro , arrimahaan ayaan loo baahnayn in qofka ay geliyaan walaac weyn , waayo arrimahaan waxay asalkooda ka imaanayaan cadaadiska hawada , taasoo is dhinta ( macnaha cadaadiskaas) marka ay diyaaradu kor u sii kacdo ama ay dhulka ka sii fogaataba .
Sideedaba muddo ku dhoow nus-saac ayey diyaarada masaafo 10 k.m ah dhulka ka fogaataa taasoo markaas cadaadiska hawada hoos u dhigta heer uu qof kastaa dareemi karo , waxaase jirta in diyaaradaha casriga ah lagu qalabeeyey waxyaabo cadaadiska hawada yareeya diyaarada gudeheeda waxayna taas suuragal ka dhigtay in hawadu caadi noqoto marka ay diyaaraddu 2 ilaa iyo 3 K.M dhulka ka fogaato .
Dhanka kale , waxaa jirta in dadka qaba san-boorka ama xasaasiyadaha ay isku bahda yihiin ay caburmaan, ama ay riiraxyoodaan oo qufac badan iyo hindhiso ka timaado , oo dhegaha hawada ku xiranto shanqar badana sameeyaan , sidaas aawadeed ayey dhaqaatiirtu ku talinayaan in qofka noocaas ah uu qaato haddii ay jirtey daawo uu u qaadan jirey xasaasiyadaas waxyar ka hor intuusan diyaarada fuulin ama uu dhaqtar u tago si daawo ka hor tag ah loo siiyo .
Arrin kale oo muhiim ah ayaa waxay tahay in marka ay diyaaradu degayso ay is dhinto hawada ogsijiinta (oxygen) ah diyaarada gudeheeda heer ay weli dadku xamili karaan yaraanteeda , waxayse arrintaani dhib ku tahay dadka ka buka sanbabada ,ama qaba wadna xanuunka , ama ay dhiig yaraan hayso (ANAEMIA) kuwaasoo ay tahay inay dhaqtar u tagaan inta aysan diyaarada ku safrin si loo hubiyo awooda ay u leeyihiin inay diyaarad raacaan iyo in kale .
Marka loo soo noqdo haweenka uurka leh ayaa ayagana lama huraan ay tahay inay la xiriiraan dhaqtarka inta ayan ku safrin wax diyaarad ah haddii ay isku tuhmayaan dhiig la'aan , ama ay ilmaha horey uga dilman jireen , ama sidkeedu dhamaad yahay.
Waxa ayadan raad iyo saamayn weyn oo muuqata ku leh caafimaadka qofka socotada ah , marka uu qofkaasu gaaro meesha uu u socdey sidii uu isugu jaangoyn lahaa watiga meesha uu tegey iyo kan naftiisa oo horey ugu jaan go'naa waqtiga meesha uu ka yimid sida; waqtiga seexashada , toosida , iyo cuntaynta [Jet Lag], ayadoo dhamaan waxyaabahaasi shaqooyin jirka ka socda yihiin ayaa hadana ay qasab tahay in qofka isagoo aan culays weyn iska saarin uu la qabsado waqtiga , ama habeenka iyo maalinta ka duwan kuwii uu ka yimi.
Walaaca dadka qaarkii marka ay tagaan meel ku cusub ayaa wuxuu keenaa inuu qofku halmaamo ama ka mashquulo xilligii uu nasan lahaa , wax cuni lahaa , ama musqul tegi lahaa , taasoo markaas keenta in qofka si dhib yar gaas ugu kaco ama uu saxaroon waayo , ama uu mararka qaarkood muddo dheer qatooyo ku joogo oo marka uu wax cuno ay calooshu dhaqaaqdo , sidaas daraadeed ayaa qofka looga baahan yahay inuu ka digtoonaado inuu halmaamo naftiisa ilaa iyo heerkaas.
W.D: Axmed-yaasiin Maxamed Sooyaan
SOMALITALK.COM | November 23, 2002 | AFEEF" Aragtida qoraalkan waxaa leh qoraaga ku saxiixan
Salaadda iyo Caafimaadka
Daraasad eey sameeyeen culimo Mareykan ah ayeey ku sheegeen in salaadda muslimiintu tukato tahay mid wax badan ka tareysa cudurada dhabar xanuunka iyo GUJI...
QORAALKII HORE EE AXMED.YAASIIN:
Dhibaatooyinka Naas Nuujinta
HOOYOOYINKU CARRUURTA LABO SANO HA NUUJIYEEN!!